चीनबाट थप १० लाख र कोभ्याक्सबाट थप ३ लाख ५० हजार डोज खोप आउँदै
संवाददाता १ साउन २०७८, 4:23 pm
काठमाडौं, १ साउन । आउँदो दुई साताभित्र चीनबाट कोभिड–१९ विरुद्धको ३० लाख डोज भेरोसेल खोप नेपाल आइपुग्ने भएको छ । खोप ल्याउनका लागि नेपाल वायुसेवा निगमले उडान तालिका समेत तय गरिसकेको छ । आउँदो बिहीबार चीनबाट थप १० लाख खोप आउने निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रकाश पौडेलले जानकारी दिएका छन् । खोप लिन बुधबार निगमको वाइडबडी जहाज बेइजिङ जाने कार्यक्रम छ ।
चीनसँग किनिएको खोप साउन ६ गते पौनै ६ः०० बजे गएर साउन ७ गते बिहान खोप लिएर जहाज नेपाल आइपुग्ने छ ।
यस्तै साउन ७ गते पुनः जहाज गएर साउन ८ गते र साउन ९ गते गएर जहाजले साउन १० गते खोप नेपाल ल्याउने छ । चीन सरकारसँग ननडिस्क्लोजर सम्झौताअनुसार सरकार ‘भेरोसेल’ खोप खरीद गरेर ल्याउन थालेको हो ।
यसअघि असार २५ गते आठ लाख मात्रा खोप चीनबाट ल्याइएको थियो । सरकारले चीनबाट खोप ल्याएपछि नियमितरुपमा खोप अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । चीनबाट यसअघि खरिद गरिएको ८ लाख डोज खोप आइसकेको छ भने अब ३२ लाख डोज खोप आउन बाँकी छ ।
यस्तै सरकारले खरीद गर्ने बाहेक कोभ्याक्स सुविधामार्फत पनि सरकारले खोप ल्याइरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले ६० लाख जनसंख्यालाई पुग्ने खोप कोभ्याक्सले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार खोप आइरहेको जानकारी दिए । सरकारले असार २८ गते अमेरिकाबाट १५ लाख ३४ हजार ८५० मात्रासहितको जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको हो । यसअघि कोभ्याक्स सुविधामार्फत तीन लाख ४८ हजार खोप भारतबाट प्राप्त भएको थियो ।
यस्तै जापान सरकारले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत जापानमै उत्पादित कोभिड–१९ विरुद्धको एस्ट्राजेनिका खोपको १६ लाख मात्रा नेपाललाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ६५ लाख ८२ हजार ८५० मात्रा खोप आइसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप तथा बालस्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले कोभ्याक्समार्फत थप खोप आउन थालेको जानकारी दिए । कोभ्याक्समार्फत तीन लाख ५० हजार डोज खोप आउन थालेको हो ।
सरकारले चीन र अमेरिकाले उपलब्ध गराएको खोप प्राथमिकताका आधारमा लगाइरहेको छ । असार २९ देखि यही साउन २ गतेसम्म मुलुकभरि नै खोप अभियान थालिएको हो । भेरोसेल ५५ वर्ष र सोमाथिका उमेर समूह तथा जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप ५० वर्षदेखि ५४ वर्ष उमेर समूहका सबै नागरिकलाई लगाइँदैछ ।
सरकारले १८ वर्षमाथिका कूल दुई करोड २० लाख जनसंख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म पहिलो मात्रा २६ लाख २१ हजार ४७६ र दोस्रो मात्रा ११ लाख आठ हजार ८६८ ले लगाइसकेका छन् । नेपालमा कोभिशिल्ड, भेरोसेल र जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप लगाइएको छ ।